Company Profile - toy ny Valve (Tianjin) Co., Ltd
tsy voahozongozona Gate Valve
Non Rising tahony Gate Valve
Rising vatan Gate Valve
Toy ny Valve (Tianjin) Co., Ltd locates any Tianjin - mavitrika indrindra ny toe-karena any amin'ny faritra avaratr'i Shina. Toy ny miditra tsimoramora dia avo-end orinasa mpamokatra entana entana miditra tsimoramora orinasa izay manana endrika fikarohana sy ny fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, tolotra barotra ao anatin'ny iray. Manana ny R & D Tsy Miankina foibe, nandroso ny teknolojia orinasa mpamokatra entana, sy ny fampiharana hentitra mifanaraka fenitra iraisam-pirenena. Amin'ny nandroso injeniera famolavolana fomba, tsara mandroso fitaovana orinasa mpamokatra entana, fitiliana fanamarinana fitaovana sy ny hevitry ny mahia famokarana, dia "toa an'i Valve" azo antoka fa ny tsirairay anjara amin'ny vokatra rehetra isika Supply ao avo lenta sy ny fampisehoana.
Ny kalitao fanomezan-toky avy amin'ny fitantanana ny tsipiriany rehetra. Hatramin'ny fanorenany, ny orinasa dia nandray solosaina-nanampy famolavolana, toy ny CAD sy ny ventin-asa, ary ny voalohany mba hampidirana nandroso Enina Sigma fitantanana. Nanorina napetraka ny rafitra fitantanana hentitra tsara, Tohizo ny hanenjika aotra kilema vokatra. Misahana ny lolo isika miditra tsimoramora, vavahady miditra tsimoramora, miditra tsimoramora izao tontolo izao, maso miditra tsimoramora, baolina miditra tsimoramora, hydraulic fanaraha-maso miditra tsimoramora, mahay mampifandanja miditra tsimoramora sy ny andian-dahatsoratra vokatra. Izany ihany koa ny mahatonga trano valves amin'ny fitaovana isan-karazany, ny fanerena, ny habeny sy ny vokatra hafa, dia misy maherin'ny 50 andian-dahatsoratra, mihoatra ny 1200 karazany.
Toy ny Valve (Tianjin) Co., Ltd
Ny fahafahana famokarana isan-taona mihoatra ny 6.000 taonina. Products manenika ny tenany rehetra ny faritra ao amin'ny firenena, ary naondrana tany Eoropa sy Etazonia sy ireo firenena hafa, be mpampiasa amin'ny rano sy ny drainage, fanorenana, herinaratra, Orinasa, metallurgical sy ny orinasa. Product hakingan-tsaina, kalitao avo sy ny vidiny mirary, natoky ny mpampiasa.
Efa lasa tsara rafitra iraisam-pirenena ISO9001 taratasy fanamarinana, toy ny Valve manana tsara lehibe sy salantsalany fitaovana milina fanodinana 178 milentika, 32 fisafoana karazana fitaovana nafarana avy any ivelany. Product famolavolana tantara, rafitra nandroso, faran'izay famokarana teknolojia, mahia famokarana, tanteraka tratra. Ny hentitra ny fanaraha-maso ny kalitao fanomezan-toky rafitra sy ny rafitra fitantanana, dia efa nahatratra ny ambaratonga ambony kokoa ny famolavolana, fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, sy ny fisafoana fitsapana. Strong famokarana fahaiza-manao ny "Toy ny miditra tsimoramora" ao amin'ny fotoana fohy indrindra azo atao ny manome ny vokatra, ary manome Ara-potoana sy mahomby rehefa avy-varotra fanompoana mba hahazoana mpanjifa fahafaham-po ambony indrindra.
Ny hoavy dia haorina amin'ny fotoana izao, toy ny Valve dia ny kilasy voalohany siansa sy ny teknolojia zava-baovao, kilasy voalohany fanompoana, toop tsara fanahy fandraisana handray anjara amin'ny ho avy ny famoronana. Noho ny kalitaon'ny vokatra sy ny mpanjifa fahafaham-po hamolavola ny raharaham-barotra ny Company, amin'ny Nifanesy koa ny fanenjehana sy ny fampandrosoana maharitra mihoatra noho ny tenantsika. "Likv nofy" hanao "nofy Shinoa" mahafinaritra kokoa!